How Palau became the first tourism leader in 2020? | Palau travel news
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka Palau » Sidee Palau u noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee dalxiis sanadkii 2020?
Sidee Palau u noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee dalxiis sanadkii 2020?
Waa maxay nooca looshannada qorraxda ee ugu fiican ee lagu ilaaliyo maqaarkaaga marka aad joogto xeeb ku taal Hawaii, Florida ama Palau?
Isticmaalka kareemka qorraxda ma siinayso dalxiis tikidh bilaash ah si loo dilo reefs. Caanaha qoraxda oo ay ku jiraan oxybenzone iyo octinoxate, laba kiimiko oo caan ah oo loo yaqaan inay waxyeelleeyaan reefs,
Dilka reefs macnaheedu waa dilka warshadaha safarka iyo dalxiiska, oo ay ku xigto dilka dhaqaalaha dal yar sida Palau.
Dawladda Palau, sidaa darteed, waxay noqotay waddankii ugu horreeyay ee iibinta muraayadaha qorraxda noocan oo kale ah ay hadda sharci-darro tahay, xilligii Madaxweyne Tommy Remengesau. Wuxuu ahaa Madaxweynihii sagaalaad ee Palau tan iyo 2013. Wuxuu markii hore noqday madaxweynihii toddobaad ee 2001 ilaa 2009. Wuxuu Senator ka ahaa Palau National Congress intii u dhaxeysay labadiisa maamul.
Palau waa waddan madaxbannaan iyo jasiirad ka badan 500 jasiiradood, qayb ka mid ah gobolka Micronesia ee galbeedka Badweynta Baasifigga. Jasiiradda Koror waxay hoy u tahay caasimaddii hore, sidoo kale waxaa loo yaqaan Koror, waana xarunta ganacsiga jasiiradaha. Babeldaob ka weyn wuxuu leeyahay caasimada maanta, Ngerulmud, oo lagu daray buuro iyo xeebo ciid ah oo ku yaal xeebta bari. Waqooyiga woqooyi, monoliths-kii hore ee basalt-ka ahaa ee loo yaqaanay Badrulchau waxay jiifaan dhul caws leh oo ay ku wareegsan yihiin geedo timireed
"Waa inaan ku noolaano oo aan ixtiraamno deegaanka maxaa yeelay deegaanku waa buulka nolosha," ayuu yiri madaxweynaha Palau Tommy Remengesau.
Oxybenzone iyo octinoxate ayaa qaata iftiinka ultraviolet, shucaaca sababa gubashada qoraxda iyo dhaawaca maqaarka.
Kiimikooyinka sunta ah ee sunta loo adeegsado ayaa laga helay dhammaan deegaannada muhiimka ah ee Palau iyo unugyada ugu caansan Palau. Madaxweynaha Palau wuxuu yiri: "Wax dhib ah kuma qabno inaan noqono wadankii ugu horeeyay ee mamnuucaya kiimikooyinkan, waxaanan qeybteena ka qaadan doonnaa faafinta warka."
Bakhaarada ku iibiya muraayadaha qoraxda leh kiimikooyinkaas ayaa lagu ganaaxi karaa ilaa $ 1,000, dalxiisayaasha soo galaya dalka looma oggolaan doono inay la yimaadaan shaashadda qorraxda jabisa.
Marka laga reebo dhuxusha maqaarka, labada kiimiko ayaa la muujiyey inay isbeddelaan oo ay waxyeeleeyaan DNA-da, iyo sidoo kale inay qalloocan yihiin oo dilaan meeraha carruurta. Dabbaashayaasha midab-cadaanka ah ee ka walwalsan gubashada qorraxdu weli way isticmaali karaan kuwa reef-aaminka ah.
"Anaga oo ah ilaaliyaasha waxyaabo badan oo aduunka caan ka ah, oo ay ku jiraan UNESCO World Heritage Site, waa waajib ina saran in aan dhiiri galino daaweynta mas'uulka ka ah astaamahan kumanaan kun oo booqdayaal ah oo ka kala socda adduunka oo dhan si ay ula soo kulmaan," sharciga ayaa akhriyaya.
Inbadan oo kamid ah dadka degan Palau waxay arkeen dhaqamada bey'ada bay'ada u leh martida aan aqoonta lahayn oo ay kujiraan ka saarida noolaha dhifka ah, qatar galinta dhuxusha finiinka ama wasakhda kiimikada, iyo ka tagida qashinka caaga ah.
Sharci kale wuxuu kaloo xirayaa 80% aagga dhaqaalaha ee gaarka u ah meesha lagu keydiyo badda si kalluumeysiga iyo howlaha badda sida macdanta iyo ganaaxa shark, iyadoo la saarayo mamnuucid kalluumeysi ganacsi in ka badan 190,000 mayl laba jibaaran oo bad ah.
Hawaii iyo Key West, Florida waxay raaci doonaan Palau sanadka 2021.